Maxaa keenay in cododkii Jubaland ee uu ku tashanayay Deni u wareegaan Xasan? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa keenay in cododkii Jubaland ee uu ku tashanayay Deni u wareegaan...
Muqdisho (Caasimada Online) – Doorashadii madaxweynaha Soomaaliya ee dhacday Axadii lasoo dhaafay ayaa noqotay si ka duwan sidii la filayey marka la eego habka ay u codeyn doonaan xildhibaanada.
Murashaxiin la islahaa waxay kusoo bixi doonaan wareega koowaad ayaa dib u dhacay, codod murashax ku tashanayay ayaa waxaa urursaday mid kale oo u fududaaday inuu wareega koowaad ugu soo gudbo.
Heshiis ay horay u gaareen madaxweyneyaasha Puntland Saciid Deni iyo Jubaland Axmed Madoobe ayaa habeenkaasi buray, markii qaar ka mid ah xildhibaanada Jubaland ee uu soo saaray Axmed Madoobe ay ugu shubeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, tallaabadaasi oo filan waa ay ku boqotay Saciid Deni oo tiradii uu filayay ku hungoobay.
Dhabar jabka Saciid Deni uu kala kulmay Axmed Madoobe ayaa dhalisay caro iyo inuu Saciid Deni ku eedeeyo madaxweynaha Jubaland inuu balantii ugu baxay. Waxaa intaas dheer in lix ka mid ah xildhibaanadii Puntland ay codkooda siiyeen Xasan Sheekh Maxamuud.
Xog lagu kalsoon yahay oo ay heshay Caasimada Online ayaa sheegaya in Axmed Madoobe iyo madaxweyne Xasan Sheekh uu saacadihii danbe ee ololaha doorashada dhex maray heshiis aan weli faah-faahin laga helin.
Axmed Madoobe ayaa aad u doonaya in shaqsi kasoo jeeda beeshiisa loo magacaabo ra’iisul wasaare, hase yeeshee ma cadda haddii taas uu aqbalay madaxweyne Xasan Sheekh oo lagu yaqaan inuu yahay qof aan go’aanadiisa siyaasadeed saameyn lagu yeelan.
keensan doono shaqsiga laga dhigi doono ra’iisul wasaaraha uu soo
Axmed Madoobe ayaa xilka ra’iisul wasaaraha imaan doona la doonaya Dr. Maxamed Yuusuf Aw-Daahir oo heyb ahaan kasoo jeeda beesha Ogaadeen jilibka Cawlyahan. Dr Maxamed ayaa u shaqeeyo hay’adaha Qaramada Midoobay.
Tallaabadaan ayaa dab kusii shidi doona carada Saciid Deni uu ka qaaday tallaabada ay qaadeen xildhibaanada Jubaland iyo guuldaradii uu la kulmay.
Guusha uu gaaray Xasan Sheekh waxaa qeyb weyn ku lahaa xildhibaanada Jubaland iyo xildhibaanada Digil iyo Mirifle iyo kuwa reer Waqooyiga intooda badan oo usoo jabay Xasan Sheekh.